रवी लामिछानेलाई बाह्र प्रश्न - Enepalese.com
रवी लामिछानेलाई बाह्र प्रश्न
बिकाश थापा २०७९ असार ७ गते २२:२७ मा प्रकाशित
भ्रष्टचार,राष्ट्रियता,पारदर्शिता,नैतिकता,शुःसासन र नेताहरूको क्षमताको बिषयमा रवी लामिछाने प्रत्रकार हॅुदा ठुला ठुला प्रश्न उठाए। कतिपय कुराहरूले समाजमा राम्रो प्रभाव पनि पार्यो भने तथानम गाली र घृणाको पत्रकारीताले नैतिकता गुमायो।आवेगको भरमा प्रमाण विना गरिएका गालि पनि पत्रकारीता हुन्छ भने नजिर बस्यो।यसको शुरुवात गर्ने काम उहॅा बाटै भयो।अव राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापती ज्यू ले आम जनमानसमा उठेका यी यावत प्रश्नहरूका उत्तर कहिले दिनुहुन्छ?क्यामेरा अगाडी बसेर अरुको नैतिकताको बिषयमा औलो ठडाउॅदा अरू औलाहरू आफैतिर फर्किएका छन् र थिए।यि प्रश्नहरूको उत्तर पाए नेपाली जनता धन्य हुने थिए।
१.तपाई न्यूज २४ मा हॅुदा गर्ने भनिएको द लिडर(The Leaders) कार्यक्रमको लागी हजारौं हजार यूवा बाट प्रति ब्याक्ति रु १००० को दरले उठाएको करोडौ रुपयॅाको भौचर र आर्थिक पारदर्शिता खोई ? उक्त करोडौ पैसाको हिसाब किताब जनता माझ कहिले बुझाउनु हुन्छ? आर्थिक पारदर्शितमा कतिको बिश्वास गर्नु हुन्छ?
२.धूर्मुस-सुन्तलीको जस्तै समाज सेवाको नाममा संसार भरिका नेपाली दाजुभाई दिदि बहिनीहरू सॅग कति चन्दा संकलन गर्नु भयो र संकलित रकम कहॅा र कति खर्च गर्नु भयो? त्यसको सुका/सुकाको हिसाव किताव पार्टी सभापतिको हैसियतले जनता माझ कहिले ल्याउनु हुन्छ?
३.तपाई अमेरिका बसाईको क्रममा नेपाली नागरिता त्याग्नु भयो वा भएन्? यदि अमेरिकी नागरिक बन्नु भएको हो भने कहिले देखी पुःन नेपाली नागरिक बन्नु भयो? अहिले तपाई नेपालको अंगिकृत नागरिक हुनुहुन्छ वा बंशज? नागरिता त्याग्नु र देश बेच्नुमा कति फरक रहेछ ?
४. तपाई एउटा संञ्चार गृहको मालिक ।राज्यको चौथो अंङ्ग सॅग घनिभुत रूपले जोडिएको मानिस तर तपाई पुर्ण रुपमा स्वतन्त्र नभई राजनीतिमा लाग्दा स्वार्थ बाझिने (Conflict of Interest) लाई भविष्यमा कसरी सम्बोधन गर्नु हुन्छ? यस बिषयमा तपाईको बुझाई र तपाईको पार्टीको आधिकारिक धारणा के हो ?
५. तपाई मालिक रहेको संञ्चार गृहको निष्पक्षता,पारदर्शिता र नैतिकताका बिषयमा उठेका यावत प्रश्न,भ्रम र शंक्काहरू बारे नेपाली जनतालाई कसरी बिश्वास दिलाउन सक्नु हुन्छ? संञ्चार माध्यममको दुरुपयोग हॅुदैन् भन्ने जिम्मावारी कस्ले लिन्छ र दिन्छ?
६.तपाई एउटा परिवार मिलाउन नसक्ने मानिसले देश मिलाउॅछु भन्दा जनताले तपाईको नैतिकता र इमानदारिता माथि प्रश्न गर्छन्।अव आम नेपाली जनतलाई कसरी बिश्वास दिलाउनु हुन्छ ? तपाईका छोरा-छोरी बाल-बच्चा प्रति तपाईको नैतिक जिम्मेवारी रहॅदैन्? आफुले गरेका सबै ठिक अरुले गरेका सबै बेठिक भन्ने सोचले आम मानिसमा कस्तो मनोवैज्ञानिक असर पर्ला?
७.तपाईले बॅाचि आऊनु भएको जिवन स्तरको आर्थिक स्रोत र पहॅुच के हो? तपाईको चल अचल सम्पति र बैड्कहरूमा तपाईको बचत रकम कति छ ? तपाईले आफ्नो चलअचल सम्पतिलाई जनता माझ कहिले सार्वजनिक गर्नु हुन्छ?
८.तपाईहरूले राजनीतिक पार्टीको नाम नै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी राख्नु भयो।धेरै नेपाली नागरिक कुनै पनि पार्टीमा आस्था राख्दैनन्।स्वतन्त्र रहेर र बॅाच्न चाहन्छन् ।नेपालको संविधान अनुसार स्वतन्त्र नागरिक र उम्मेदवारी व्यक्तिको सार्वभौम र नैसर्गिक अधिकार हो।कुनै नेपाली नागरिकले म कुनै दलमा लाग्दिनँ भनेर स्वतन्त्र रूपमा बॅाच्ने पाउने अधिकार,निर्वाचन लड्न र जित्न पाउने अधिकार यसरी छिन्न मिल्छ? यो शब्दले स्वतन्त्र जति सबै मेरो पार्टीको भन्ने अर्थ लाग्छ वा लाग्दैन्? तपाईले हर्क राई र बालेन साहहरूलाई जबरजस्त बिवादमा ल्याउन चाहनु भएको हो?
९.तपाईको पार्टीको परराष्ट्रनीति,मानव अधिकार,बिश्वास,आर्थिक र सामाजिक नीति।गणतन्त्र ,धर्मनिरपेक्ष,संघियता ,समावेशी प्रति पार्टीको आधिकारीक धारणा,सन्देश एवं बिश्वास के हो? पार्टीको कार्यदिशा,रणनीति र कार्यनीति के के हुन्?
१०.देशको आर्थिक नीति ,बिकासका योजना,आर्थिक समृद्धीका र रोजगारी बिषयमा के कस्ता योजनाहरू छन् ?
११.पत्रकार शालिकराम पुडासैनीको आत्महत्या प्रकरण भित्रको अदृष्य पाटोलाई बाहिर ल्याउॅछु भन्नु हुन्थ्यो।यतिका बर्ष बिति सके । जनता प्रतिक्षमा छन् । यसको सत्य तथ्य कहिले बाहिर ल्याउनु हुन्छ?
१२.अन्य राजनीतिक पार्टी र तपाईको पार्टीमा नेपाली जनताले के भिन्नता महसुस गर्ने पाउॅछन्? तपाईकै भाषामा अन्य राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूलाई झोले र तपाईका पार्टीका कार्यकर्ताहरूलाई फ्यान भनि कुन नैतिकतामा टेकेर सम्बोधन गर्न मिल्छ? यस्तो पूर्वाग्रही सोच र व्यवहारले भविष्यमा कस्तो राजनैतिक अराकता ल्याउला? तपाईले घृणाको राजनीतिलाई प्रेरणा दिन खोज्नु भएको हो?